Ny rafitr'ireo rafitra fitrandrahana tafo sy karazana fitaovana ampiasaina amin'ny tafo lava dia misy fiantraikany amin'ny trano fanorenana trano sy ny fampiononan'ny tompony. Ny tanjaky ny fitaovana voafantina dia miankina amin'ny fiainana serin'ny tranobe.
Famaritana ny tora-pasika
Kofehy metaly. Kofehy metaly ny karazana tafo mahazatra indrindra. Izy io dia manana fifandanjana tsara amin'ny vidiny sy ny kalitaony. Ny singa dia rakotra metaly vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina manokana.
Sakafo mena. Ity dia fitaovana maoderina maoderina ahitana ny kalitao tsara, amin'ny fangatahana amin'ny fananganana tranobe misy kianja marobe. Mifototra amin'ny fiberglas misy bitumen izy io. Ny endriny dia miankina amin'ny granule basalta na mineraly mineraly. Tena tsara ho an'ny karazana tafo be pitsiny, satria tsy misy fako mandritra ny fametrahana azy. Mitaky fototra matotra izany.
Vatosoa vita amin'ny varahina. Mifidy tafo metaly vita amin'ny lamba vita amin'ny varahina isika. Vao mainka nihanatanjaka izy io, nanamora ny enta-mavesatra sy ny fanoherana ny korontana. Ny fitaovana dia anisan'ny safidy teti-bola ho an'ny tafo.
Firafitra voajanahary. Ny iray amin'ireo karazana tafo lehibe indrindra fahiny. Ny safidy lafo vidy dia vita amin'ny tanimanga vita amin'ny bakteria, ny vidiny mora indrindra dia vita avy amin'ny simenitra simenitra sy fasika. Mahavariana ny faharetany, tsy mandoro ary tsy mihodina.
Ondulin. Manana tavy mahatsiravina izy io, ahitana bitumen, cellulose sy mineraly pigments. Na dia kely aza ny lanjany, dia tsy mitovy ny tanjaky ny habeny sy ny fahaiza-mampiasa azy. Ny tsy fisian'ny asbestos dia mahatonga azy ho tia namana tontolo iainana. Amporisihina ho an'ny tranobe madinika izay mora ny manararaotra azy manokana.
Ankoatra ireo karazana tafo voatanisa, izay mety amin'ny tafo mahazatra sy mando, dia misy sora-bavon-kofehy, tapa-kazo, vy na tilam-bidy.
Ahoana ny manantona mpandriaka?
Sofa ao amin'ny efitrano ho an'ny zazavavy
Famerenana ny varavarana amin'ny tanany manokana
Fotsy mainty sy fotsy eo afovoany
Efitrano fanorenana ho an'ny zatovolahy
Fivarotana vy amin'ny biriky
Ny varavaran'ilay "hazo oak"
Ahoana ny fomba hametrahana fandriana amin'ny efitrano fandriana iray - toro-hevitra mahasoa ho an'ny fanorenana anatiny
VSD - soritr'aretina amin'ny olon-dehibe, izay tsy fantatry ny rehetra
Ny halavan'ny vava
Toby misy crème proteinina
Ketchup miaraka amin'ny tsiranoka - recipe
Inona no dikan'ny anaran'i Varvara?
Ny cysts amin'ny oviana - vokany
Ahoana no hivoatra?
Firy ny zaza mila mavesatra isam-bolana?
Tsy ara-dalàna amin'ny fitondrana vohoka
Volo maitso eo afovoany
Ny diathesis saline amin'ny voa
Inona no atao hoe lipoma ary mampidi-doza izany?
Trichomoniasis - soritr'aretina
Ny kofehin'i Ariadne - iza Ariadne amin'ny angano grika?
Ahoana ny endriky ny chanterelles?